Home Wararka TOOS: Doorashada Gudoomiyaha BFS oo hada ka socota xarunta Afasyooni
TOOS: Doorashada Gudoomiyaha BFS oo hada ka socota xarunta Afasyooni
Waxaa hadda teendhada Afisyooni si habsami ah uga socda doorashada Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ay ku tartamayaan 7 Musharax. Musharaxiinta is diiwaan gelisay oo markii hore ahaa 8-xubnood, waxaa tartanka isaga haray guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Sida ay shaaciyeen guddiga doorashada. Wareega hore waxaa ka gudbaya 4 musharax, hadii uusan Musharrax helin 50+1 oo ah 139, tiradaas oo ah cod dheeri.
Previous articleDoorashadii oo socota iyo Rooble oo ku fashilmay in Xil. Ceelwaaq doorashada qayb ka noqdaan
(Deg Deg) Qoor Qoor oo safar degdeg ah ku aaday magaalada...
Gud. Maxkamada Caalamiga C/Qawi A. Yuusuf oo ka digay in Soomaaliya si...